Caalamka, 14 January 2018
Axad 14 January 2018
Dumarka Sacuudiga oo Markii Ugu Horreeyay Daawaday Ciyaar Kubadda Cagta ah
Haweenka dalka Sacuudiga ayaa marki ugu horreysay Jimcihii shalay loo ogolaaday in ay si toos ah garoomada uga daawadaan ciyaaraha kubadda cakta.
Dibadbaxyo Rabshada Wata oo Ka Dhacay Giriiga
Booliska rabshadaha ka hortaga ee dalka Giriiga ayaa u suntan dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday kumanaan ruux oo Jimcihii isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Athens.
Wiil Soomaali ah oo Kanada Laga Musaafurinayo
Dowladda Kanada ayaa masaafurineysa wiil Soomaali ah oo isaga oo 6 jir 2001-di Kanada tagey. Cabdul Yuusuf Cabdi, waxaa uu la socdey labo habar-yarihiis ah iyo walaashiis Faadumo Yuusuf Cabdi oo 2 sano un ka weyn.
Netanyahu oo ku Baaqay in La Xiro Hay'adda QM ee Taageerta Qaxootiga Falastiiniyiinta
Reysal wasaaraha Israa'iil Binyamin Netanyahu ayaa golihiisa wasiirrada u sheegay in hey'adda QM ee qaxootiga Falastiinyiinta ah caawisa ay sii seeto-dheereyneyso dhibaatada, lama huraanna ay tahay in la xiro.
Madaxweynaha Iiraan oo ku Baaqay in La Qaado Xayiraadda Baraha Bulshada
Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa sheegay maanta oo Isniin ah in dhamaan mas’uuliyiinta la dhaleeceyn karo, isago sidoo kale sheegay in dibadbaxayaasha Iran ay ka careysan yihiin arrimo ka badan dhaqaala xumada ay ka cabanayaan.
Heerka Shaqo La'aanta Kanada oo Hoos Udhacay & Soomaalida oo Wali Shaqo La'